fertiliser – bokashimyanmar.com
Get started with bokashi!
Fermented compost versus traditional compost
by Bokashi Myanmar May 23, 2018 May 23, 2018 1 Comment
An independent scientific study that compares traditional composting (oxidization) of manure with fermentation of manure using the bokashi method shows the latter has significant advantages. The carbon footprint is presented on page 17.
The results from the two methods are somewhat different. The study shows that composting of conventional manure releases significant amounts of energy in the form of greenhouse gases while fermentation conserves energy and nitrogen in the manure.
The following was observed in compost made using the fermentation method:
— The energy in manure is retained during fermentation and stimulates the probiotic soil microbes when applied to agricultural land. This makes the soil more fertile.
— Much of the nitrogen in the manure is conserved during fermentation, which significantly improves the NPK balance. (Nitrogen in the traditional compost is converted to gases such as nitrous oxide,ahighly aggressive greenhouse gas.)
– Greenhouse gases are are fixated and can be returned to farmland.
Read the report: Fermentation versus composting
EM and bokashi infobokashi, compost, cow dung, fertiliser, manure, research, soil carbon
English text follows!!! အမှိုက်စီမံဆောင်ရွက်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးပြောကြားရင်း နတ်ပြည်လိုသာယာတဲ့ နေရာလေးမှာ သာသာယာယာ။ ဟော်တယ်ဝန်ထမ်းတွေ၊ စည်ပင်အရာရှိတွေ၊ စားဖိုမှူးတွေ အလုပ်သမားတွေနဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲလေးတစ်ခုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ မနက်ဖြန်မှာတော့ ဘိုကာရှီပမာဏကြီးကြီးများများလုပ်နည်းကို သရုပ်ပြရင်း ဆွေးနွေးပေးသွားမှာပါ။ ဒီကြားထဲမှာပဲ ရေတကြိမ်နှစ်ကြိမ်ကူးနိုင်အောင်စီစဉ်ဖြစ်ကြပါသေးတယ်။ Oliver Esser Soe Thet ရေ ကိုယ်တွေကိုခုလိုတကူးတကဖိတ်ကြားပေးတာ ကျေးဇူးပါနော်။ ငပလီမှာ အပြောင်းအလဲ လုပ်ဆောင်ဖို့ရာ ကောင်းမွန်တဲ့ တွန်းအားတွေအကြောင်းပြချက်တွေ အများကြီးရှိနေပါတတယ်။ We’re in paradise — talking about waste management! Today we ranaworkshop for this great group of chefs, hotel staff, municipal management and employees. Tomorrow we’ll runahands-on demo of how to do big-scale bokashi. And in between, we are managing to haveaswim or two! Thanks Oliver Esser Soe Thet for inviting us! There’salot of motivation to change things in Ngapali. /Bokashi Myanmar Ngapali team #bokashimyanmar #growinspired #largescalebokashi #ngapali #lagunalodge
English text follows!!! ရုံးခန်းအသစ်ထဲ မုန့်စားပွဲ။ အလုပ်လည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ပြီး နေကလည်းအရမ်းပူတော့ ကိုယ်တွေလိုနေတာ ဖရဲသီးလေးပဲပေါ့။ နောက်တဆင့်က အဖွဲ့အစည်းအဝေး။ နောက်မိနစ်နည်းနည်းလောက်ဆိုပိုပြီးစနစ်တကျ ဖြစ်လာတော့မှာရယ်။ Snack party in the new office! We’ve been working hard and its hot, watermelon is just what we need. Next step: big team meeting. We’re getting more organised by the minute! /Bokashi Myanmar workers #bokashimyanmar #northdagon #soilrevolution #snacksandcoffeeyay
အောက်မှာ မြန်မာလိုပါ ပါသေးတယ်နော။ Amazing! We haveanew office! It’s right next to our new yard which will make life so much easier for us. We signed the contract this weekend and are starting up today with our first team meeting. Bokashi Myanmar is growing! /Bokashi Myanmar team ဝမ်းမြောက်ဖွယ်သတင်း။ ကိုယ်တွေမှာရုံးခန်းအသစ်ရသွားပါပြီ။ ပိုအဆင်ပြေချင်တော့လဲ ခြံဘေးကပ်ရပ်အိမ်ကလေးကို ရလိုက်တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့က အိမ်စာချုပ်ချုပ်ခဲ့ပြီး၊ ဒီနေ့ပဲ ကျမတို့ရဲ့ ပထမဆုံး အဖွဲ့အစည်းအဝေးလုပ်နိုင်ခဲ့ပြီ။ ဘိုကာရှီမြန်မာကတော့ ကြီးထွားလို့လာနေပါပြီ။ #bokashimyanmar #northdagon #soilrevolution #foodwasteisnottrash #workinghardthesedays
Bokashi Myanmar is part ofamuch bigger story. It’saglobal organisation, headed by EMRO Japan, and the many organisations under the EM banner havealong history of cooperation and generosity. After all, we’re all working for the same goal:ahealthier planet. This week here in Yangon we met our Japanese colleague Keishi Asai from EMRO Japan, and also our EM colleagues from Jaguco Myanmar. Our focus at Bokashi Myanmar is making food waste into fertile soil; others are focussing on agriculture, water protection and other environmental areas where EM can makeadifference. We’re really happy to be part of this change for the good. /Bokashi Myanmar #bokashimyanmar #soilrevolution #EMROJapan #jaguco #bethechange
Never too young to learn about bokashi!!
Small hands and big radishes! Today we had suchalovely bunch of kids from International School Yangon come visit us at U Thant House. We talked about how they collect the leftovers from their lunch intoablue bokashi barrel at school (ISY isa#bokashischool) , how it all becomes compost and can feed the soil again. And then how to sow seeds and wait for big juicy vegetables to grow. The kids got their hands into the compost and tasted everything in the garden. It was the best fun! Thanks Than Zaw Htay for the fantastic garden you’ve made! And all you wonderful students - it wasajoy having you! /Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #uthanthouse #rootsandshoots
အချိန်တော့ အတော်ယူခဲ့ရတယ်။ သို့ပေမယ့် ခုဆို ကိုယ်တွေမှာ လိုဂိုလည်းရှိပြီ။ကုမ္ပဏီရော လိပ်စာကတ်ပါရှိပြီ။ ပျော်စရာကြီး.... စတေဖီတယောက် ပုံနှိပ်ဆိုင်တွေဆီသွားပြီး ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းခဲ့တာရယ်။ ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်။ တီရှပ်တွေတောင်လုပ်ဖြစ်မလားပဲ။ ဒါပေမယ့် စိတ်အရမ်းမလှုပ်ရှားကြသေးနဲ့အုံး။ လိုဂိုလေးကိုနှစ်သက်တယ်။သို့သော် ဒါကကိ်ုယ်တွေတင်ပဲလေ။အစိမ်းရောင်နဲ့ အညိုရောင်လေးနဲ့အနက်။ food waste နဲ့ သစ်ရွက်ခြောက်, မြေဆွေး။စသည်။ အရမ်းရိုးရှင်း အရမ်းအရေးပါပြီး အရမ်းလည်းမှန်ကန်တယ်။ ဆိုတော့ ဒါလေးကို စောင့်ကြည့်လေ့လာပေးပါအုံး။ ကျမတို့ရဲ့ #Soilrevolution သတင်စကားလေးပြန့်နှံ့ဖို့ လာနေကြပါပြီနော်။ It’s taken usawhile to sort it out, but we now haveacompany,alogo, and business cards! Woohoo! Stefi ran around to printers today and fixed the lot. It was so fun we may even do t-shirts! But let’s not get over-excited... We love the logo. It’s just us. Green plus brown = black. Food waste + brown leaves = soil. Etc. So simple, so important and so true. So look out for it, we’re coming to spread our #soilrevolution message! /Inspired and happy Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #organicwasteisnottrash #finallywehavebusinesscards #sogrownup BokashiCompost.be Grow Inspired with Claire Mummery
English text follows!!! မြောက်ဒဂုံက ကိုယ်တွေရဲ့ ဘိုကာရှီခြံသစ်ကလေး ရုပ်လုံးကောင်းကောင်းပေါ်စပြုပါပြီ။ လွန်ခဲ့တဲ့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်လောက်တုန်းက ခြုံနွယ်ပိတ်ပေါင်းတွေနဲ့စတင်ခဲ့တာ။ ခုဆို ငှက်ပျောတွေ၊ ဒန့်သလွန်တွေ၊ သဘောင်္ပင်တွေစိုက်လို့ ဘိုကာရှီတဲတစ်လုံးပါထိုးနေပြီ။ ဘယ်လိုနေနေပါ၊ ခြံရဲ့ပင်မရည်ရွယ်ချက်က တန်နဲ့ချီတဲ့ ချက်ပြုတ်စားသောက်ရာကကျန်တဲ့ကျတဲ့ food wastes တွေကို ရှင်းလင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ပါ။ ပြီးတော့ တောင်ပုံယာပုံသော သစ်ရွက်ခြောက်တွေရောပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ ခြံနေရာစီမံခန့်ခွဲရင်း စတင်နေကြတာ။ နေအရမ်းပူပူမှာလုပ်ရတာပါ။ လုပ်အားလာပေးကြသူများကိုလည်းကျေးဇူးအရမ်းတင်မိပါတယ်။ Our new #bokashifarm in North Dagon is coming along really well! We started withajungleafew weeks ago, we cleared it toadesert with meter deep sand, and now we are planting bananas, moringas, papaya - and buildinga#bokashished! However the purpose of our yard is actually to process food waste, tons of it. And brown leaves, piles of them! So we’re planning our space and getting started. It’s hot work and we’re so grateful to our volunteers! /bamboo workers of Bokashi Myanmar #bokashimyanmar #soilrevolution #organicwasteisnottrash #greenyangon
English text follows!!! ခုဆိုရင် ဘိုကာရှီမြန်မာဟာ မှတ်ပုံတင်ပြီးသား ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သွားပါပြီ။ စိတ်လှုပ်ရှားပျော်စရာကြီး။ စာရွက်စာတမ်းတွေလည်းရပြီ။တံဆိပ်တုံးတွေအပြင် ငွေတပြားမှမရှိသေးတဲ့ ဘဏ်စာအုပ်တွေတောင်ရှိနေကြပေါ့။ အစီစဉ်ကတော့ ဘိုကာရှီသတင်းစကားကိုပျံ့နှံ့စေမယ်။ တတ်နိုင်သမျှလူများများကိုသင်ပေးမယ်။ ကျောင်းတွေ၊စားသောက်ဆိုင်တွေ၊ဟော်တွေ၊ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွေ စတဲစတဲ့နေရာတွေမှာ ဘိုကာရှီပရောဂျတ်တွေစတင်နိုင်ဖို့ကူညီမယ်။ မြောက်ဒဂုံမှာ ဘိုကာရှီမြေဆွေးခြံကို စတင်နေပြီမို့လို့ ဈေးကွက်တင်ရောင်းဖို့ မြေဆွေးလဲထုတ်နိုင်ပြီ။သူများတွေကိုလည်း သင်ပေးနိုင်ပြီ။ အလုပ်လုပ်တာမှာ စနစ်ကျစေဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီလျောက်ခဲ့တာပါ။ အဖွဲ့အစည်းလေးကသေးငယ်ပေမယ့် အလျင်အမြန်ကြီးထွားလာနေတာမို့၊ soil revolution ကိစ္စ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရာ စနစ်တကျရှိနေဖို့ လိုအပ်ပြန်ပါတယ်။ ကိုယ်တွေရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းက ဟော်တယ် စားသောက်ဆိုင် ပြီးတော့ နိုင်ငံတကာကျောင်းတွေစတာလိုမျိုး ဘိုကာရှီနဲ့စပ်ဆက်ပြီး ငွေကုန်ကြေးကျ ခံနိုင်သူတွေကျ တန်ရာတန်ဖိုးပေးသင့်တယ်ပေါ့။ ဒါက တနည်းတဖုံအားဖြင့် နိမ့်ပါးတဲ့ ဒေသတွင်းတစ်ချို့နေရာတွေမှာ ကိုယ်တွေပရောဂျတ်တွေစတင်နိုင်အောင် ကူညီရာလည်းရောက်တယ်လေ။ ဧပရယ်လကုန်လောက်ကနေစပြီး မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ အပင်လေးတွေနဲ့ ဥယျဉ်စိုက်ခင်းတွေအတွက် ဘိုကာရှီမြေဆွေး စရောင်းချနိုင်ဖို့ စီစဉ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်ပဲ ကိ်ုယ်တွေရဲ့ စောင့်ဆိုင်းကပ်စတန်မာ စာရင်းမှာ ပါဝင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပြောပါနော်။ ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းက ကိုယ်တွေကိုထောက်ပံ့ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုလဲဖြစ်ပါတယ်။ Bokashi Myanmar isaregistered company! Amazing. We have our official papers, some very fancy stamps, and some shiny new bank accounts with no money in! Our plan is to spread the message about bokashi, teach as many people as we can, help people start bokashi projects in schools, restaurants, hotels, monasteries and communities. We have started our compost farm in North Dagon so we can produce #bokashicompost (for sale!) and train others. We startedacompany because we need to be systematic in what we do. Our organisation is small, but we are growing and need to be organised so we can really start this #soilrevolution rolling! Our idea is that those that can pay for bokashi-related training and products should pay (eg hotels, restaurants, international schools etc) and that this will help support our work in local communities with less resources. At
English text follows!!! စပါးအကြောင်းသင်ယူ။ ကျမတို့လို ဥရောပသားတွေအတွက်တော့ ဒီအာရှအတွေ့အကြုံကလုံးဝအသစ်ပါပဲ။ စိုက်ပျိုးရေးမှာ အီးအမ်ကို အသုံးပြုလို့ရနိုင်တာတွေ အရမ်းကို များပါတယ်။ ဘိုကာရှီ မြန်မာရဲ့ အဓိကကစိုက်ပျိုးရေးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအပိုင်းကိုတာဝန်ယူနေကြသူလုပ်ကိုင်နေကြသူတွေလည်းရှိပြီးသားပါ။ ကျမတို့ရဲ့ပင်မအလေးထားလုပ်ဆောင်လိုတာက အမှိုက်ပုံရောက်မယ့်အနေအထားကနေ ဩဂဲနစ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကို ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး မြေဆွေးအဖြစ်ပြောင်းလဲပစ်ဖို့ပါ။ ဆက်စပ်မှုရှိကြတယ်ဒီလို။ လူတယောက်ထဲကအကုန်လုံးကိုမလုပ်ဆောင်နိုင်ဘူး။ သို့သော် လူတိုင်းက တစ်စိတ်တဒေသဆီတော့ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နိုင်ကြတာပဲ။ ပြီးတော့လဲ ကိုယ်တွေရဲ့ ပင်မအလုပ်က မြို့ပြသန့်ရှင်းရေး မြို့ပြစိမ်းလန်းရေးပါ။ Learning about rice! For us Europeansavery new and totally Asian experience. There is so incredibly much you can do with EM in agriculture. Farming is not our main focus here at Bokashi Myanmar and there are other people working with that. Our focus is on diverting organic waste from landfill and making the world’s best compost! It’s related. No one can do everything, but everyone can do something. And urban cleaning, urban greening is our thing. /Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #urbancleaningurbangrreening #organicwasteisnottrash
English text follows!!! ထိုင်းနိုင်ငံ ဆာရာဘူရီမြို့က တပတ်တာအီးအမ်သင်တန်းမှာ တွေ့ရတဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တူ မိတ်သစ်မိတ်ဟောင်းတွေပါ။ ဘူတန်၊ ဗီယက်နမ်၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ နီပေါလ်၊ မလေးရှား၊ စင်္ကာပူ၊ ဂျပန်၊ ပြီးတော့ မြန်မာလဲပါတာပေါ့။ အားလုံးကိုတွေ့ဆုံပြီး တယောက်နဲ့ တယောက် မျှဝေသင်ကြားခွင့်ရတာ တကယ်အားတက်မိပါတယ်။ အပိုဆုအနေနဲ့ အကျိုးပြုအနုဇီဝပိုးလေးတွေအကြောင်း၊ မြေဆီအကြောင်း၊ သဘာဝအတိုင်းစိုက်ပျိုးနည်းအကြောင်း စတာစတာတွေကို နဂိုကသိထားတာထက် အများကြီး ပိုသိလာရပါပြီ။ တကယ့်ကောင်းမွန်စွာအသုံးချခွင့်ရခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုပါပဲ။ These are all our new friends and colleagues from our training week at the EM farm in Saraburi, Thailand! Bhutan, Vietnam, Philippines, Nepal, Malaysia, Singapore, Japan - and of course Myanmar! It’s been very inspiring to meet everyone and learn from each other. Plus, we know way more about microbes, soil, and nature farming than we didafew days ago. A week well spent! /Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #naturefarming #soilrevolution #bokashi #organicwasteisnottrash
We are quiteateam here at Bokashi Myanmar! We’ve just arrived in Thailand and will spend the week at the EM training farm in Saraburi outside Bangkok. We’ll meet our bokashi and EM colleagues from all over SE Asia and the Pacific. Great fun! And also very valuable for us to be part of suchastrong and knowledgeable network. Here we’re meeting up with our extended Bokashi Myanmar team: Claire, from New Zealand, who you will be seeing more of because she’s coming back with us to Myanmar, and Lisa from the Philippines, who is involved inaproject very similar to ours in Manilla. We are so fortunate having such skilled and energetic people around us, together we really can makeadifference. Yay! /Big Bokashi Myanmar team #bokashimyanmar #soilrevolution #wecansolvethis #emro #learningalot